कसरी हामी म्यानुअली वर्डप्रेस स्थापनाहरू माइग्रेट गर्दछौं Martech Zone
शुक्रबार, अगस्त 8, 2014 शुक्रबार, अगस्त 8, 2014 Douglas Karr
तपाई सोच्न चाहानुहुन्छ कि तपाईको वर्डप्रेस साइटलाई एक होस्टबाट अर्कोमा सार्नु वास्तवमै सजिलो छ, तर यसले तपाईलाई निराश पार्न सक्छ। हामीले हिजो राती ग्राहकलाई सहयोग गरिरहेका थियौं जुन एक होस्टबाट अर्कोमा जान निर्णय गरियो र यो द्रुत रूपमा समस्या निवारण सत्रमा परिणत भयो। मान्छेहरूले सामान्य रूपमा के गर्छन् - उनीहरूले सम्पूर्ण स्थापना zip up गरे, डाटाबेस निर्यात गरे, नयाँ सर्वरमा सारियो र डाटाबेस आयात गरे। र त्यसपछि यो भयो ... खाली पृष्ठ।
समस्या यो हो कि सबै होस्टहरू समान रूपमा सिर्जना गरिएको छैन। धेरैसँग अपडेचेको बिभिन्न संस्करणहरू छन् जुन बिभिन्न मोड्युलहरू चल्दैछन्। केहिसँग वास्तवमा मनमोहक अनुमति मुद्दाहरू छन् जसले फाइलहरू अपलोड गर्दा समस्याहरू निम्त्याउँदछ, तिनीहरूलाई केवल पढ्ने मात्र बनाउँछ, र छवि अपलोड मुद्दाहरूको कारण। अरूसँग PHP र MySQL का बिभिन्न संस्करणहरू छन् - होस्टिंग ईन्डस्ट्रीमा भय terrible्कर समस्या। केहि ब्याकअपले लुकेका फाईलहरू समावेश गर्दछ जुन सर्भरमा स्वामित्व क्याचिaching र रिडिरेक्शनको कारण बिभिन्न होस्टमा विनाशकारी काम गर्दछ।
र निस्सन्देह, यसले समावेश पनि गर्दैन फाइल अपलोड सीमितताहरु। यो सामान्यतया पहिलो मुद्दा हो यदि तपाईंसँग ठूलो वर्डप्रेस स्थापना छ ... डाटाबेस फाइल अपलोड गर्न र MySQL प्रशासक मार्फत आयात गर्न एकदम ठूलो छ।
त्यहाँ मद्दत गर्न केहि राम्रो उपकरणहरू छन्, जस्तै CMS मा CMS। तपाईं Automattic आफ्नै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ VaultPress सेवा - भर्खर साईटको जगेडा गर्नुहोस्, नयाँ होस्टमा नयाँ WordPress स्थापना गर्नुहोस्, VaultPress पुनर्स्थापित गर्नुहोस्, र साइट पुनःप्राप्ति गर्नुहोस्। यी व्यक्तिहरूले तपाईले वेबसाइटलाई सार्न प्रयास गर्दा धेरै मुद्दाहरूको वरिपरि काम गर्ने राम्रो काम गरेका छन्।
यद्यपि हामी यी चीजहरूमा एक्लै जान्छौं र कष्टदायी रूपमा प्राय: ती आफै हुन्छन्। हामीलाई नयाँ समस्यामा तान्नु भन्दा पनि नयाँ स्थापना कारक मनपर्दछ। हामी यहाँ प्रयोग गर्ने चरणहरू यहाँ छन्:
We सम्पूर्ण स्थापना जगेडा गर्नुहोस् र साइट राख्नुहोस् र यसलाई सुरक्षित राख्नका लागि स्थानीय रूपमा डाउनलोड गर्नुहोस्।
We डाटाबेस निर्यात गर्नुहोस् (जहिले जगेडाको साथ समावेश गरिएको छैन) र सुरक्षित राख्नका लागि यसलाई स्थानीय रूपमा डाउनलोड गर्नुहोस्।
We WordPress स्थापना ताजा नयाँ सर्भरमा र यसलाई उठाउनुहोस् र चालु गर्नुहोस्।
We एक पटकमा प्लगइनहरू थप गर्नुहोस् तिनीहरू सबै मिल्दो र काम गर्दै छन् भनेर निश्चित गर्न। केही प्लगइन विकासकर्ताहरूले निर्यात उपकरणमा तिनीहरूको सेटि includingहरू समावेश गरेर वा आफ्नै सेटिंग्स निर्यात र आयात प्रदान गरेर राम्रो काम गरेका छन्।
We सामग्री निर्यात गर्नुहोस् अवस्थित साइटबाट WordPress WordPress उपकरण प्रयोग गरेर वर्डप्रेसमा नै निर्मित।
We त्यो सामग्री आयात गर्नुहोस् नयाँ साइटमा WordPress WordPress उपकरण प्रयोग गरी सही WordPress मा निर्माण गरियो। यसको लागि तपाइँले प्रयोगकर्ताहरू थप्नु पर्छ ... थोरै परिश्रमशील तर प्रयासको लायक।
We FTP wp-content / अपलोड फोल्डरहरु जहाँ हाम्रा सबै अपलोड गरिएका फाइल सम्पत्तिहरू नयाँ सर्भरमा छन्, फाइल अनुमतिहरू ठीकसँग सेट गरिएको छ भनि सुनिश्चित गर्दै।
हामीले permalinks सेटिंग्स.
We विषयवस्तु zip up र स्थापना गर्नुहोस् WordPress थीम स्थापनाकर्ता प्रयोग गर्दै।
हामी थिम लाईभ राख्छौं र मेनू पुन: निर्माण गर्नुहोस्.
We विजेट रिडु गर्नुहोस् र प्रतिलिपि गर्न / पुरानो देखि नयाँ सर्वर सम्म आवश्यक सामग्री पेस्ट गर्नुहोस्।
We साइट क्रल गर्नुहोस् हराइरहेको फाईलहरूको साथ कुनै पनि मुद्दाहरूको लागि हेर्न।
We सबै पृष्ठहरू म्यानुअली समीक्षा गर्नुहोस् साइट को लागी सबै कुरा राम्रो देखिएको छ सुनिश्चित गर्न।
यदि सबै कुरा राम्रो देखिन्छ भने, हामी गर्नेछौं हाम्रो DNS सेटिंग्स अपडेट गर्नुहोस् नयाँ होस्टलाई सूचित गर्न र प्रत्यक्ष जान।
हामी त्यो सुनिश्चित गर्नेछौं ब्लक खोज सेटिंग्स पठन सेटिंग्स अक्षम छ।
हामी कुनै पनि थप्दछौं CDN वा क्यास गर्दै साइटलाई छिटो प्राप्त गर्न नयाँ होस्टमा संयन्त्रहरूलाई अनुमति दिइयो। कहिलेकाँही यो प्लगइन हो, यो अरू पटक होस्टको उपकरणको अंश हो।
हामी गर्नेछौं वेबमास्टर्स उपकरणहरूको साथ साइट रिक्रल गर्नुहोस् गुगलले हेरिरहेको कुनै समस्याहरू छन् कि भनेर हेर्नका लागि।
हामी पुरानो होस्टलाई एक हप्ता वा सोझै राख्नेछौं ... केही प्रकोपको सवालमा मात्र। एक हप्ता वा सो भन्दा राम्रो चलिरहदा, हामी पुरानो होस्ट असक्षम गर्नेछौं र खाता बन्द गर्नेछौं।
टैग: ब्याकअप शब्द थिच्नुहोस्सेमी सेमीकसरी WordPress सार्न को लागीWordPress सार्नुहोस्वेबसाइट सार्नुहोस्WordPress लाई सार्नुहोस्WordPress पुनर्स्थापित गर्नुहोस्Wordpress पुनर्स्थापना गर्नुहोस्VaultPressWordPress बैकअपWordPress पुनर्स्थापनाzip WordPress
सामाजिक मिडिया मोनिटरिंग र एनालिटिक्स को विश्व